नालायक नेतृत्वबाट लाहराको परिवर्तन संभव छैनः सुनिल बुढा ! « Nepal Break
नेकपाको झगडा सिद्धान्तको होइनः कमल थापा
कुरा त देशको गर्न सकिन्छ । विदेश र विश्व ब्रमाण्डको पनि गर्न सकिन्छ । तर हामीले चाहेको परिवर्तनको कुरा गर्ने हो भने आफु र आफ्नो गाउँघरबाटै सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यही कुरा गरौं जहाँबाट परिवर्तनको दियो बाल्न सकिन्छ । त्यहीँ दियो बाल्ने कोशिस गरौं जहाँको बत्ति धुर्मुराईरहेको छ । या भनौं, बत्ति निभ्नै लागेको छ ।
म जन्मेको गाउँ लाहरा हो । ठुलिभेरी न.पा ५, डोल्पा अन्तरगत पर्ने यो गाउँ राजनीतिक हिशाबले धेरै पिछडिएको छ । हुन त यो गाउँ नगरकेन्द्र र डोल्पा सदरमुकामबाट धेरै टाढा छैन । भौतिक दुरीले धेरै टाढा नभएपनि विकास, समृद्धि र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको दुरी भने कयौं हजार गुणा टाढा छ । सरल रुपमा भन्नुपर्दा, संघिय गणतन्त्रको पहिलो स्थानिय चुनावमा लाहराबाट उम्मेदारी जिरो रह्यो । अर्थात, एउटा वडा सदस्य समेतको उम्मेदारी परेन । जितेर वडादेखि नगरसम्मको प्रतिनिधित्वकोको कुरै भएन ।
यो त समस्या भयो । यसको पछाडीको कारण के हुन सक्छ त ?
यो गाउँमा जिल्ला तहका राजनीतिकर्मीहरु नभएका होइनन् । यो पार्टी र उ पार्टी भनेर झण्डा नहल्लाएका, हल्ला नमच्चाएका वा माथिल्लो भनिएका नेताहरुको चाकडी नगरेका मान्छेहरु नभएका पनि होइनन् । झोले, टोले हुँदै जिल्ला तहको राजनीतिमा प्रभाव पारी बजेट हसुर्ने विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताहरु पनि छन् । तरपनि किन लाहरा राजनीतिको सानो इकाई वडामा पनि प्रतिनिधित्व हुन सकेन त ?
यसका मुख्यतय तीन कारणहरु छन् । एक, गाउँको विकास गर्ने इच्छा र पार्टी पंक्तिमा प्रभाव राख्न सक्ने नेता नभएर । दुई, जति छन् ती सबै दुई पैसामा बिक्ने भएर र तेस्रो, अर्को वडा बन्न सक्ने हुँ र लाहरा गाउँलाई ठुला गाउँमा जोडेर अलमल पारिँदा । यी सबैभन्दा माथिल्लो र महत्वपुर्ण कारण, जिल्लामा हरेक नागरिकका लागि सोँच्ने ढंग र तरिका भएका नेता नभएर नै लाहरा राजनीतिक रुपमा पछि परेको देखिन्छ ।
गाउँकै निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा वडामा आएको बजेट लाहरामा आउन सकेन । जति आयो माथिल्लो निकाय नगर, प्रदेश र संघबाट थोरैभएपनि आयो । तर त्यो बजेट आफुले पहल गरि ल्याएको भनि गाउँकै ठालुहरुले आधाभन्दा बढी कमिशनमा सक्काए । बाँकी रहेको पनि उपभोक्ता समिति बनेर सिध्याए । गाउँका लाटा सोझाले पाउने भनेको काममात्र हो जुन गरे बापतको पैसा पनि पाउन सकेका छैनन् गाउँलेहरुले ।
ल ठिक छ, यी तमाम् समस्याहरु पहिला समाधान गर्न कसैले सोँचेनन् र गरेनन् पनि । हामीले वडा जसरीपनि थप्नुपर्छ भनि पहल गर्दा गाउँमै आएर स्थानिय चुनाव देखि प्रदेश र संघको चुनावमा विभिन्न नेताहरुले वडा थप्ने प्रतिवद्दता गरेका थिए । तर अहिलेसम्म पनि वडा थपेको खबर सुन्न पाइएको छैन । लाहराको लागि यति गर्नै नसकेको हो कि गर्नै नचाहेको ?
हुँमा वडा सदस्यसम्म हुँदा केही हदसम्म बजेट त पाएका छन् । तर लाहरा भने पछाडीको पछाडी नै छ, अहिलेसम्मपनि । यस्तै हुँदै जाने हो भने अर्को चुनावसम्म पनि न वडा थपिनेछ न त एउटा सदस्यको प्रतिनिधित्व नै । वडा थप्नमा त यी अहिलेका वडाअध्यक्ष, मेयर, प्रदेश सांसद, मन्त्री र संघका सांसदहरु सबै फेल भए । ती नालायक ठहरिए । तीनले अबपनि चुनावमा भोट माग्न आउँदा कुहिएको मुख ल्याएर गन्हाउने बाचा गर्नेछन् । अब लाहराबासी सचेत हुनैपर्नेछ र तीनीहरुलाई बहिस्कार गर्नैपर्छ । र लाहराको नेतृत्व विकासमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो नेतृत्व जसले आँट, हिक्मत र क्षमता राखोस्, लाहरामा वडादेखि जिल्लासम्म प्रतिनिधित्व गराउन सक्ने र विकासको फड्को मार्ने तथा लाहराका जनतालाई न्याय दिनसक्ने । त्यसका लागि मेरोपनि संघर्ष र पहल जारी रहनेछ ।
लेखक सुनिल बुढा आइटी उद्यमी हुन् । उनी जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको जिल्ला समन्वय समिति सदस्य तथा जसपा काठमाडौं डोल्पा सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष पनि हुन् ।